Global Voices teny Malagasy » Amin’ny fanoherana ny zon’ny pelaka, miara-dalana mba hisara-kevitra kokoa ny solontenan’ny mpitondra fivavahana avy ao Trinite sy Tobago · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Jolay 2018 18:47 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika (fr) i Edwige Dugas, Zo Razafy
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fivavahana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Ampahany amin'ireo vahoaka nijanona teo anoloan'ny Lapan'ny Fitsarana tao Trinité Tao amin'ny Seranan'i-Espaina tamin'ny 12 aprily 2018 taorian'ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Ambony nirona tamin'i Jason Jones. Nitory ny fanjakana i Jason Jones, nandresy lahatra fa mifanohitra amin'ny zony araka ny Lalàmpanorenana ny lalànan'ny “sodomia”. Sarin'i Maria Nunes, nahazoana alàlana avy aminy.
Roa volana lasa izay, nanambara  ny mpitsara iray ao amin'ny Fitsarana Ambony ao Trinite sy Tobago fa “tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana”  ny ampahany amin'ny Lalàna mifehy ny fandikan-dalàna ara-nofo  manasazy ny firaisan'ny samy olon-dehibe any amin'ny lava-pitombenana; androany, misy vondrona mpitondra fivavahana milaza fa hanohitra mafy  ny fampidirana ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana sy ny fanitsiana ny lalàna mifandraika amin'ny fitoviana  izay miaro ny vitsy an'isa ara-pananahana.
Hita amin'ity vondrona ity ny arseveka katolika Jason Gordon, ny solontenan'ny fivavahana miozolomana sy kristiana evanjelika ary Satnarayan “Sat” Maharaj, sekretera jeneralin'ny fikambanana Haindò Sanatan Dharma Maha Sabha
Tsy dia niray hevitra foana ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana: Nandidy an'i Joseph Harris, nitondra talohan'i Gordon, i Maharaj izay fantatra amin'ny toetra mampiady hevitra, tamin'ny Mey 2016, hoe “ny raharahanareo iasana saina”  [mg] eo amin'ny sehatry ny fampanambadiana ankizy. Ho azy, resaka manokan'ny fiarahamonina Haindò sy ny fanjakana izany. Nanomboka teo, nambara ho tsy ara-dalàna  ny fanambadian'ny zaza tao Trinite sy Tobago.
Saingy nahita hevitra iraisana ny vondrona tao amin'ny fandaharantenin'ny biôlôjia sy ny lahy/vavy: “Adam sy Steve” sy “ny rafi-piarahamonina” — ny firafitry ny fianakaviana nentin-drazana — “ambanan-doza”. Jason Jones, izay nitory ny fanjakana tamim-poahombiazana tamin'ny fanoherana ny lalànan'ny “sodomia”, ary niantso ny hevitr'izy ireo ho “maharikoriko”. 
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay “notohanana ” fikambanana iray tsy miankina antsoina hoe Rebuild TT, niantso  ireo mpanao politika ireo solontenan'ny mpitondra fivavahana mba hanova ny lalànan'ny fanambadiana, maro an'isa manokana mba isorohana ny fanekena ho ara-dalàna ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Manohitra ny fanitsiana izay mety ho atao amin'ny lalànan'ny fitoviana herijika  ihany koa izy ireo.
Toa nanambara  ny Arseveka Katolika fa “tsy tokony hametraka ny fitakiany ny vitsy an'isa madinika be tabataba”. Nolazainy ihany koa fa mampiseho ny fomba fijerin’ ny 90 isan-jaton'ny mponina ao Trinite sy Tobago ny fomba fijerin'ny vondrona, saingy tsy nisy loharanom-baovao notononiny anehoana io isa  io.
Raha inoana ny isan'ireo tsikera natao tao amin'ny tranonkala, dia tokony ho anisan'ny “10% sisa” ireo mpampiasa ny tambajotra sosialy — mihevitra ny ankamaroan ‘izy ireo fa diso laharam-pahamehana ireo fikambanana ara-pivavahana ary tohina amin'ny fihatsarambelatsihin'ny hevitra ijoroany , raha jerena ny tantaram-piainan'izy ireo manokana sy ny lasan'ny fikambanana isoloan'izy ireo tena.
Naneho hevitra tao amin'ny twitter ilay mpanao gazety Judy Raymond:
Manao izay azonareo atao mba hampihenana ny vono olona, fametavetana ny ankizy, herisetra an-tokantrano, adin'ny andian-jiolahy, ny tsy fananana fialofana, fandrahonana ny fahalalaham-pitenenana, ny hantsana amin'ny karama, ny kolikoly,… Eh! Zava-dehibe kokoa ny fampiasana ny fitarihanareo hibaiko hoe iza no manan-jo na tsia hifankatia.
Raha ny amin'i Kejan Haynes mpiara-miasa aminy, nisioka izy hoe:
Androany, eto Trinite sy Tobago, mpivady mitovy fananahana ampolony no nifampiteny “tiako ianao ” ary nanohy ny androny tahaka ny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga.
Any an-toeran-kafa, nisy lehilahy iray nanakenda namono hahafaty ny vehivavy vadiny talohan'ny namonoany tena.
Eritrereto hoe iza amin'ireo tranga roa ireo no hitan'ny solontenantsika ara-pinoana ho raharaha maika ho an'ny firenena.
Niely be tao amin'ny twitter sy ny tambajotra sosialy hafa ny fandraisana anjara an'i Hayne. Raha nanasa azy hanamarina ny fanakianany ireo mpitondra fivavahana ny mpisera twitter iray, nanontany raha midika hoe tsy mahazaka milefitra ny tsy fitoviana finoana aminy, dia namaly izy hoe:
Raha miezaka mafy ianareo hisoroka ny olona iray tsy hahazo ny zo fototra amin'ny maha olombelona dia eny, tsy mahazaka milefitra ianareo.
Tezitra  mafy ihany koa i Patricia Worrell, mpampiasa Facebook iray:
Ary amin'ny vaovao androany alina, inona no ho hitako fa tsy ny arseveka Jason Gordon mifampitantana amin'i Sat Maharaj niaraka tamin'ny solontenan'ny mpitondra fivavahana manohitra ny pelaka, izay, lazain-dry zareo fa manimba ny toetsain'ny fiarahamonintsika.
Tantara hafa mihitsy, hitako ny Papa Fransoà nanaiky ny fametraham-pialan'ireo Shiliana eveka tafiditra tamin'ny fanafenana ny tantara ratsin'ny herisetra ara-nofo nihatra tamin'ny ankizy.
Na izany aza, toa ny mpitondra fivavahana tao amin'ny Fiangonana Katôlika no nandray anjara tamin'ny faharavan'ny toe-tsaina tamin'ny faritra maro tamin'izao tontolo izao, Jason… Ahoana ny ho fihetsikao manoloana izany? Inona no lazainao?
Tillah Willah namoaka ny sarin'ny solontenan'ireo mpitondra fivavahana, niampy izao fanehoan-kevitra  izao :
Tahaka ireo maherifon'ny angano, ry botry tratra aoriana, mpanolana, mpanadala zaza tsy ampy taona sy mpanabojaboja vatan'olona, mpisambotra sy mpankahala. Eo ry zareo, manangona ny hoditra mitsangan-dry zareo mba handavaka hahatratra ny ivelany, manavatsava ireo zaza efa lasa vady simba fiainana, vatana feno ratra an'ireo vehivavy an'arivony voatery mivavaka ho an'ny vadin'izy ireo mpanararaotra, andian-taranaka kilongalahy nampijalian'ny pretra. Voavonjy izahay. Voaaro izahay.
Ary mazava ho azy, nisy ny sary-sy-soratra. Ny iray amin'ireo naka tahaka ilay sarimihetsika “Justice League” [Ligin'ny Rariny] ary niantso ilay vondrona hoe “Injustice League [Ligin'ny Tsy Rariny]: nivondrona ireo solontenam-pivavahana mba hampiseratsaraka an'i T&T indray mandeha tsy miverina!”:
Sary-sy-soratra iray hafa nampandray volontany avy amin'ny horonantsarin'ilay mpihira amerikana Chidich Gambino hoe “This is America”  mampiseho ny arseveka manondro fiadiana eo amin'ny saina miloko avana.
Izao i trinite
Farany, nanoratra  tao amin'ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra izay nampieritreritra indrindra tamin'ny lohahevitra ilay poeta Shivanee Ramlochan hoe:
Nanjaka teo amin'ny fivavahana ny lehilahy mpanao fahadisoana hatramin'ny nahitantsika ny famantarana lakroa tao anatin'ny fahalotoana betsaka sy lonaka. Nanontany tena foana ny olona hoe: “Inona no hataon'i Jesoa?” Avy eo izy ireo dia nanao ny mifanohitra amin'izany, amin'ny anaran'i Jesoa voahosotry ny ra. Amin'ny anaran'i Shiva. Amin'ny anaran'ny Mpaminany. Ireo olona mandresy lahatra antsika fa mila miala amin'ny zontsika isika ankehitriny. Tsy vitan'ny hoe mifanohi-kevitra ireo olona ireo fa mitarika amin'ny fifanoheran-kevitra faratampony: ny fandavana ny fitiavana izay nampanantenain'Andriamanitra mpiahy ny zanany. Mety hoe miteny ho an'ny fivavahan'izy ireo manokana izy ireo. Saingy fantatsika fa tsy ao amin'izany Andriamanitra. Azony atao ny miampanga ny soatoavinao, ary manambara fa mpikambana ao amin'ny vondrona anjorom-bala ianao, vondrona jiolahimboto, manana feo mahery. Fa izany foana no nataon'ireo mpampahory. Miaraka amin'ny fanapenam-bava. Miaraka amin'ny swastikas navadika. Miaraka amin'ny fampanantenana afobe sy ny famaizana ny fanesoram-pananana, ny fanaratsiana ary ny fahafatesana. Ary na aiza na aiza, hatrany Stonewall ka hatrany Gorgetown, isika, izay antsoina ho mpikomy, manangana ny tanantsika, ny totohondrintsika pelaka tanteraka, mankany amin'ny habakabaka ilatsahan'ny orana avy amin'Andriamanitra, amin'ny rehetra tsy misy anavahana, mba hilazana hoe tsy afaka mamono anay noho ny zo mendrika anay ianareo. Ny sasany aminay fa tsy izahay rehetra.
Mihoatra ny folo isanjato isika […]
Ry namako pelaka, rehefa manapa-kevitra ianao hoe ahoana no itiavanao an'Andriamanitra. Na ilay lehilahy maty teo amin'ny hazo fijaliana izany. Na andriamanibavy mainty manana lelan'ny bibilava mitondra firavaka voaravaka karandoha. Hazon'ny orana.[…] Rehefa hitanao ny Andriamanitrao ka mahita anao Izy. Rehefa manolo-tena ianao ao amin'ity biraon'ny fitiavana ity, amin'ny fahazavany rehetra, ny aloka sy ny fahasarotany. Tsy misy olon'ny Fiangonana afaka manompa anao raha tsy mampiseho ny lò ao am-pony. Tsy misy fitsarana navoakan'ireo mpino antsika — izay, araka ny hitanao, fa tsy fianakaviantsika ara-pitiavana, fa olom-pantatra ao amin'ny fifanandrinana — tsy afaka mampisy bontsina amin'ny faladianao.
Afaka mandroaka anao any ivelany ireo, afaka mandà anao. Afaka mikapoka anao sy mandroaka anao amin'ny asanao. Fa rehefa mila azy ianao. Tsy afaka manala anao amin'ny Andriamanitrao ireo. mifangalatra fotsiny no azon'izy ireo atao.
Nilaza ny governemantan'i Trinité-sy-Tobago fa mbola hampiakatra  ny fitsarana mikasika ny sodomia. Misy fotoam-pitsarana iray fanampiny amin'ny 4 Jolay 2018 ary mbola manantena zavatra tsara  i Jones; manantena izy fa hanohana indray ny fampidirana ny vondron'olona marefo ao anatin'ny lalànan'ny fitoviana herijika  ilay vaomieran'ny fitoviana herijika  (Equal Opportunity Commission, EOC) izay nanohana ity raharaha ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/08/121880/
 “tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana”: https://www.facebook.com/lara.quentrallthomas/posts/10156275442997354
 Lalàna mifehy ny fandikan-dalàna ara-nofo: https://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/11.28.pdf
 hanohitra mafy: http://newsday.co.tt/2018/06/11/thou-shalt-not-marry/
 lalàna mifandraika amin'ny fitoviana: https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/22.03.pdf
 “ny raharahanareo iasana saina”: https://mg.globalvoices.org/2016/06/17/83449/
 tsy ara-dalàna: https://globalvoices.org/2017/06/12/child-marriage-is-no-more-in-trinidad-tobago/
 Toa nanambara: https://twitter.com/KejanHaynes/status/1006279837324054534
 fihatsarambelatsihin'ny hevitra ijoroany: https://www.facebook.com/wendell.manwarren/posts/10155384772217601
 manantena zavatra tsara: https://www.facebook.com/marianunestrinidad/videos/10156422299959874/
 lalànan'ny fitoviana herijika: http://www.equalopportunity.gov.tt/download-act
 vaomieran'ny fitoviana herijika: http://www.equalopportunity.gov.tt/